Sold Out 4500 Lakh(Nego) For Sale
စမ်းချောင်းမြို့နယ် Windsor Tower တွင် အခန်းရောင်းရန်ရှိပါသည်။
Samone Residence For Rent In Dagon Township.
13 Lakh For Rent
Mahar Nawarat Condo For Rent In Botahtaung Township.
6 Lakh(Nego) For Rent
Kan Kaw Condo For Rent In Bahan Township.
$1300(Nego) For Rent
Shwe Hinthar Condo For Rent in Hlaing Township.
20000 Lakh(Nego) For Sale
လှိုင်မြို့နယ် မြကန်သာ ၅လမ်းနှင့် ငုဝါ ၅လမ်းတွင် လုံးချင်းရောင်းရန်ရှိသည်။
18 Lakh(Nego) For Rent
ရန်ကင်းမြို့နယ် တပင်ရွှေထီးလမ်းတွင် လုံးချင်းငှားရန်ရှိသည်။
60 Lakh(Nego) For Rent
လှိုင်မြို့နယ် ဘုရင့်နောင်လမ်းမပေါ်ရှိ လုံးချင်းအခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။